स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोलको व्यवस्था गर्न नसक्ने अनि १० बजेदेखि ५ बजेसम्म स्वास्थ्य चौकी खोल्न लगाउने, अब के गरौं सरकार ? यस्तो निर्णय गर्नुअघि एक चोटी सोच्ने कि ?
यदि मोर्चाले संविधान संशोधन गर्नैपर्छ भन्ने अडान नछाड्ने र एमालेले संशोधन गर्नुहुन्न भनिरहने हो भने कसरी सहमति हुन्छ । सकिन्छ भने लचक भएर देशको हित हुनेगरी सहमति गर्नु प¥यो । नत्र ५ विकास क्षेत्र नै ठिक छ । नत्र भने जनमत संग्रह गर्नु प¥यो ।
रुपन्देहीका युथफोर्स अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्या व्यक्तिगत कारणले भएको देखिएको छ तर एमालेले किन राजनीतिकरण गर्न खोजेको हो कुन्नी ? घटनालाई राजनीतिक रंग दिएर एमालेले आन्दोलनको आगोमा घिऊ थप्दैछ ।
​डिपी कार्की फुच्चु
मधेसी नेताले मधेसी नागरिकको लागि आन्दोलन गरिरहेको बताउँछन । तर धेरै नागरिकले उनिहरुको आन्दोलनलाई अनेक शंका गरिरहेका छन् । उनिहरुले कसका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् भन्ने त आगामी चुनावले देखाउला ।
गाडीबाट फोहोर फाल्ने, थुक्ने अनि सार्वजनिक ठाउँमा फोहोर फ्याँक्नेलाई जरिवाना र कैदसम्म हुने नियम लागु भएछ । राम्रो निर्णय तर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग र नियमन गर्ने निकायको परिणाममुखी नियमन आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्रीले आलोचना गर्नेहरुले जति आलोचना गरेपनि आफनो सम्पति एक कठ्ठा जग्गा मात्रै भनिरहदा लाग्छ, कठै हाम्रो सिस्टम । जसले जे भन्यो त्यही पत्याउनुपर्ने । जे मन लाग्यो त्यही सम्पती विवरण देखाएर नागरिकलाई थाङ्नामा सुताए झैं गरे । के यसको कसैले छानविन गर्न सक्दैन ?
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री दिलिप गच्छदारले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय उल्ट्याउने संकेत गर्नुभयो । नेता सबै गरिब भइाहाले अनि के गरुन त ? अहिलेसम्म कुन चाहिँ फ्रि थियो र ? लुकाएर खानु पथ्र्यो अबदेखि देखाई देखाई खाने भए ।
​ नारायण पौडेल
काभ्रेकी लक्ष्मी नेपालीलाई बोक्सीको आरोप लगाएर सामाजिक शिक्षा पढाउने मास्टरले बाधेर लात्तै लात्तीले अनि चिर्पाटे दाउराले हानेर मारेको आज ५ दिन भइ सक्दा पनि किन पोस्टमार्टम हुन सकेन ? के नेपालको कानुन गरिबहरुकै बिपरित बनाएको हो त ?
के मन्त्री ज्यू हरुको सम्पती विवरण आफैले दिनुभएको हो ? मन्त्रीज्यूहरुको विवरणमा प्राय सम्पत्ति आफ्नो भनेर खुलाइएको छैन, सम्पत्ति पनि निकै थोरै देखाइएको छ । के यो साँच्चै होला त ? यदि सत्य हो भने चाँही सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री ज्यू लाई मेरो नमन ।
कतै संविधान संसोधनको माँगलाई लिएर आन्दोलन त कतै संशोधनको विरोधमा आन्दोलन । आखिर देशले कहिले निकास पाउने ? अनि संविधान संशोधन बारे धेरै नेता कुर्लिन्छन । तर आन्तरिक हृदयले कसैले पनि संसोधन गर्न चाहेको छैन भने जनतालाई नाटक देखाउनुको औचित्य के ?
विराटनगर जुट मिलको अवस्था र त्याहाँका पूर्व कर्मचारीको भनाई सुनेर भावुक भएँ । देशका यस्ता ठूल्ठूला कलकारखाना बन्द गर्ने, युवाको हातमा पासपोर्ट थमाइदिने अनि श्रमिकहरुको गाँस, बाँस खोसेर खुब राम्रो राजनीति गर्दै छन् हाम्रा नेताहरु । उद्योगहरु खोलेर देश को अवस्था सुधार्नु त कता हो कता भएको पनि बन्द ।
प्रिय सङ्घियता, पहिला तिमी अलिक पाको बन, अनि नेपालमा आउ । केट्केटी पाराले आउँदा यहाँ भाड्भैलो मात्रै मच्चिन्छ ।
ओखलढुङगाका भूकम्प प्रभावितसँग एक हजार रुपैयाँका दरले पैसा उठाएर सांसद, नेता र हाकिम हेलिकप्टरमा राहत बाँड्न गएछन् । पीडितको उत्थान गर्नुपर्ने ठाउँमा शोषण गर्छन । पहिला पनि भूकम्प प्रभावितको नाममा आएको राहतका सामान आफ्नो घर, गोदाममा थन्क्याउने नेताले धुर्मुस सुन्तलीको कामबाट केहि सिक्छन कि भनेको सिकेका रहेनछन ।
संघियताको नाममा कहिले तराई जल्छ, कहिले पहाड बन्द हुन्छ । नागरिकलाई लडाएर सरकार कहिलेसम्म रमिते बन्ने ?
देशैभरी ट्यालेन्ट हण्ट बाट छनौट भएका १९ वर्ष मुनिको एसियाकप क्रिकेटका खेलाडीबाट निकै आसा लागेको छ । छनौटको फरक शैलीले नयाँ प्रतिभा जन्मनेछन् ।
संघीयता खारेजको कुरा उठिसकेकाले पहिला संघीयता के हो अनि यसको आवश्यकता किन भन्ने कुरा प्रत्येक नागरिकलाई बुझाउन जरुरी छ सरकार ।
सुनसरीम बंगलादेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएको खबर सुनेर अचम्म लाग्यो । अरु देशका नागरिकलाई वंशज नागरिकता लिन प्रकृया पुर्याउनु नपर्ने, नोट भए प्रकृया पुग्ने । आफ्नै नागरिकले केही काम गर्नु पर्यो भने अनेक प्रक्रिया पुर्यााउन पर्ने कर्मचारी ।
खै, देश राजनीति मै लागेको छ । राजनीति बाहेक अरू थुप्रै काम गर्नु पर्छ भन्ने कुरा जिम्मेवारहरूले बिर्सेपछि अरूको के लाग्छ र ?
​शोभा गिरी कार्की
नेपालमा सर्वाधिक सफल हुनुपर्ने क्षेत्र विद्युत र आयुर्वेद हो तर बिडम्बना दुबै पछाडि छ, विद्युतको कुरा त आउँछ तर आयुर्वेद किन गुमनाम ?
भक्ते कामीले एचआइभी सङक्रमित भएको थाहा पाएर पनि सानु टमाटासँग विवाह गर्नुभएछ । यो खबर सुनेर भक्ते कामीलाई मरो सलाम छ ।
देउतालाई रोग र नेतालाई कानुन कहिल्यै नलाग्ने रहेछ । त्यसैले जहाँ जे बोले पनि हुने अनि जे गरे पनि हुने । समस्या समाधान हुन्छ भन्दै दिनहुँ वार्ता मात्रै गर्ने । अखिर वार्तामा के कुरा हुँदो रैछ । त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्न र सुन्न पाए हुन्थ्यो ।
सबैले आ–आफ्नो अडान नछाड्दा सङ्घियता र गणतन्त्र आइसियुमा रहेको बिरामी जस्तै भैसक्यो । यो पाराले कसरी पार लाग्ला र खै ?
नेपालको नेताहरुलाई सोधिदिनुस न, यो दुनियाँ संशोधन को नाटक छाडेर भुकम्प, बाढी ,पहिरो र आगलागी पीडितलाई राहत कहिलेसम्म दिने भनेर ।
​निमा लामा शेर्पा
जनताको यती विरोध हुँदा हुँदै ५ नम्बर प्रदेशको सिमा किन चलायो सरकारले ? यसले त सङ्घियता मुख्य मन्त्री हुन मात्रै ल्याएको प्रस्ट भएन र ?
वर्तमान प्रधानमन्त्रीले कुनै काम नगर्दै फेरि सरकार परिवर्तन हुने समय नजिकिदै छ, त्यो सरकार पनि उहीँ नौ महिनाकै लागि त होला । अनि फेरि नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार, अनि विदेश भ्रमण । मेलोमेसो पनि उही । खै कहिले सुध्रिएला हाम्रा नेताहरुको पारा ?
संविधान सबैलाई हक अधिकार दिन बनेको गतिशील दस्तावेज हो । यसले मधेसी, पहाडी, हिमाल सबैको भावना समेट्नु पर्छ । अनिमात्र नेपालको संविधान पूर्ण हुन्छ ।
फिफा बरियतामा नेपाल ५ स्थान माथी उक्लिएको समाचार सुन्दा खुसी लाग्यो । नेताहरु ओरालो लाग्दैछन्, खेल र खेलाडी माथी उक्लदैछन् । नेताले खेलाडीबाट सिक्ने कि ।
डाक्टर गोविन्द केसीको माग पुरा गर्न आइओएमको डिन नियुक्ति सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि समिति बल्ल समिति गठन भयो । निकास निक्लिनु पर्ने बेलामा समिति गठन हुन्छ अनि कसरी कार्यन्वयन हुन्छ ​।
संविधान संशोधन किन र कस्का लागी ? संसोधन हुनुपर्ने व्यवहारिक औचित्य पनि त खुल्नु प¥यो नी ।
​राजा भिषण सघर्ष
न जाडोमा राहत, न वर्खामा घर छाउने, न किस्ता किस्तामा नै रकम पाउने । यहि लयमा जाँदा पिडितको आँखामा खुशी र हाँसो कहिले छाउने ?
फुटबलमा भ्रष्टाचारीको युग समाप्त । अब नेपाली फुटबलमा नवयुगको उदय भएको छ । बधाई छ नेपाली फुटबल टिम अनि नेपाली फुटबलप्रेमी दर्शक, साथै हार्दिक धन्यवाद एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल, जसले नेपाली फुटबलमा भएको क्यान्सर अर्थात् खेल मिलेमताको अप्रेसन गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य संस्थाले बेलुका ५ बजेसम्म सेवा दियो कि दिएन भनेर कसले जाँज गर्छ ? यदि जाँच गरेपनि महिनामा १ दिन मात्र त जाँच गर्ने होला नि बेलुका ५ बजेसम्म सेवा दिने ।
सांसदलाई बैठक भत्ता कम भएछ उनका माग पूरा गरिदिनु सरकार । राज्यको धुकुटीले नपुगे हामी नागरिक मृगौला बेचिदिन्छौ ।
पढ्नलाई विद्यालय टाढा भएको भन्दै विदेश गएको पनि पढे । विदेश चाहि कति नजिक छ र ? अनि खाने मुखलाई जुगाले छेक्दैन होला नी हैन ?
सबैले राज्य कोषबाट पैसा पायका छन्, अब कुपोसित बालबालिकाहरुले पनि पाउनु पर्यो सरकार ।
नेपाली फुटबलमा लागेको भ्रष्टाचारको जालो च्यातिएपछि नेपाली फुटबल सहि बाटोमा फर्किएको छ । एकै वर्षमा तीन ओटा अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जितेर ह्याट्रिक गरेकोमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई बधाई छ । सुजाता कोइरलालाई ५० लाख दिने सरकारले यि महान योद्धालाई कति दिन्छ र कस्तो सम्मान गर्छ हेर्न बाकी छ ।
एएफसी सोलिडारी कपको फाइनल खेल्न लागेको नेपाली टोलीलाई शुभकामना । सेमिफाइनल खेल जस्तै खेल प्रस्तुत गर्न सकियो भने पक्कै पनि मकाउसँगको खेल जितिन्छ ।